Agartuu Qeerroo (Dhufaa jira…) Qalbeessaa Dhangi’aa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAgartuu Qeerroo (Dhufaa jira…) Qalbeessaa Dhangi’aa.
Agartuu Qeerroo (Dhufaa jira…)
Amajji 19,2019, Oromiyaa
Yaa du’aa nu fudhu, yaa waaq na ajjeesi! Jennaan Waraabeessi yaa Waaq waanan nyaadhu naa buusi! Jedhan. Maraaf waan barbaachisu waqni laate jedhama. Oromoonkoo har’a hawwaasa utuu adeemuu galgala irraa gara halkaniitti ce’e fakkaata. Hawwaasi kun ammoo kaan baatirii/Tiriki qabateera, kaan qabata ittiin lafa qaqqabatu qaba. Gartuun hedduun ammoo tuuta ulee qabatee jiruuf, baatirii qabatee jiru waliin socho’aa jira. Tuutni Baatirii qabatee jiru yeroo ammaa Oromoof dhaabbata, Oromoof falma. Qawween diina uummatatti dhufe Qawween irraa deebifna jedha. Tuutni Tirika/Baatiirii qabatee jiru kun uummata Oromoof barbaachisaadha. Tuutni biraan ammoo halkan keessa seenne kana ulee qaqqabatee darbaa jira. Uleen kun maallaqaan bitama, maallaqaan argama. Kanaaf tuutni kun tuuta maallaqaan tujaareef/sooromeef tuuta miidiyaan dhageettii qabudha.
Gaaffiin Oromoo ganamarraa gara guyyaa, guyyaarraa gara galgalaa, galgala irraa gara halkaniitti adeemaa jira. Halkan booda bariitu jira. Yaa warra haqa qabdanii, warra baatiriin keessan/tiriki keessan utuu abdii isin hinkutin utuu hindhaamiin halkan kana keessa isin adeemsiisaa jirtuu gammadaa! Isin nagaa barbaaddan, bilisummaa feetan bira yeroon geessanii ijaan argitan fagoo miti. Yaa warra tirika dhagaansaa duraa dhumuuf utuu wargamu ibsa cilaancilleettiin utuu abdii hinmurin qabsoo gameeyyii qabsaa’oota kaleessaa sanatti cichitanii jirtanii yeroon kabjamtan fagoo miti. Yeroon uummatni akka Bunaa isin araadu, akka Kalameellaa isin dhamdhamu gahuuf jedha. Lafa gara Barii irra jirtu. Bokkaan amma roobaa jiru, hawwaasni keessan dhoqqee keessatti kufaa, uffata keessan qabatee ka’uuf utuu warraaquu isin duraa xureessuus obsa godhaafii. Miira hogganummaa keessan uummataaf agarsiisuu ammallee itti fufaa! Uummataaf miidhamuu, uummataaf darararamuun hogganarraa hinagamuuree? Hogganaan uummataaf dura bu’ummaan socho’ee rakkoo jiru dura bu’ee ofitti hinfudhatuuree? Yeroo kana keessa waan jirtaniif hoggantootni qabsoo sabaa gammadaa jenna.
Kanneen qabata qabdan, kanneen ulee qal’oon halkan warraaqsaa keessa socho’aa jirtan isin ulee qabdan kanaan uummata tajaajilaa! Uummata tajajiluu keessatti dhimma dhuunfaaf oolfachuuf uummata bool’a du’aatti halkan kana fuutanii adeemtu taanan isiniif dhuma. Uummatichi halkan walakkaa keessa waan jiruuf qaama qabatee halkan kana keessa darbu barbaada. Kanaaf ammoo qaama itti dhiyoo dukkana sanaan harka bal’isee nii qaqqaba. Kan harkaan qabate fiixeesaa qabatee yeroof duukaa adeema. Yeroon sunis hanga bariin dhuftee qarri aduu mul’attuutti. Yaa isa barii sana geessee argitee ati eebba abbaaf haadhaa qabda. Ati ilma ayyaana qabudha. Lafti bari’uu jira. Uummatnis halkan kana darbuuf diinas ta’u fira fiixee uffatasaa qabatee halkan kana keessa hanga darbutti nii adeema. Halkan kun gaafa bari’u uummatni kaayyoosaa barbaaduu, gaaffiisaaf deebii iyyaafachuu itti fufa.
Har’a uleen waan sirka jiruuf halkan kanaan uummatni gara itti bahu hinqabu jettee uummataan Bilisoomte jechuu dandeessa. Uummatnis rakkoo hamtuu halkan walakkaa yeroo bokkaan roobu, qorri bu’ee jiru keessa waan jiruuf harka siif reebee halkan kana keessa darbuuf aggaama. Fedhiin uummataa halkan kana darbuu qofa. Halkan kana darbee jennaan ammas barii lafaa kaayyoosaa sana barbaaduun hinoolu. Gaafas isa har’a gowwomsaa jiru caccabsee nyaata, daakee galaana warraaqsaatti darba. Akkuma wayyaanee nyaatee dhabamsiise tuuta gowwomsee kaayyoosaa harkaa gatuuf aggaamuuf gaafas dhiifama hingodhu.
Yeroo Oromoon qabsoo isatti cichu, yeroo Oromoon gaaffii gaafataa tureef deebiisaa barbaadu fagoo miti. Yeroo Oromoon meerre gaaffiin keenta maaf hindeebi’u jedhu dhiyoodha. Gaafa sana warri har’a Bilisoomtee jirta jedhu waaroo salphinaa uffachuu jira. Warri har’a qabsaa’ota Oromoo dararaa jiru lafa lixaa dhaba, warri har’a habashaa irratti dhiichisiisaa jiru gaafa sana lafa dhaqu dhaba. Agartuun Qeerroo fagootti utuu hintaane dhiyootti yeroo Oromoon qabsoo isaa kan abbootni isaa itti wareegaman galmaan gahuuf yeroo Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa ba’ee qabsoo finiinsu argaa jira. Yerichis dhiyoo akka ta’e cimsee hubateera.
“Karaan sobaan darban gala nama dhiba!” Akkuma jedhan, yaa warra har’a uummata sobdanii isiniif dhumachuuf jedha. Yaa warra har’a qabsoo uummaataa bittimsuu irratti hojjettanii isiniif wayyoo! Isin akkuma nama galaanni nyaaree hoomacha du’aa qaqqabachuu jirtu.
Fuuldurri keenya ifa jedha agartuun Qeerroo. Miidiyaa irratti har’a akka waan kaayyoo isaa Oromoo keessatti maseensaniitti haa dubbatan malee miira uummataa ilaalaa jirra. Uummatni “bilisoomnee jirra; garuu alaabaan Somaalee Bordoddee keessaa maal hojjeta?” Jedhee gaafataa jiru argaa jirra. “Bilisoomnee jirra;garuu maaf alaabaa keenya alaabaa ABO hindhaabbannuree?” Jedhee yeroo uummatni gaafatu uummata cichaa ta’uusaa argaa jirra. “Nuti ABO dhaa, kaayyoon ABO nu barbaachisa, kaayyoon sun hanga galma gahutti qabsoo itti fufna wayiita Oromoon jedhaa jirutti, egereen uummataa ifa ta’uu cimseen amana. Agartuun Qeerroos qabsoon Oromoo tasa sharafamuu akka hindandeenye, kaayyoon wareegamtoota Shinnigaa sun akka galma gahuuf uummatni halkan kana keessa ba’ee gaaffiisaa itti fufuuf jira jedha.
Amajji 20,2019 Oromiyaa
Deddeebii keessa haanni dhagaa muree artist hangafaa alii shabboo!